Imikhiqizo Yokuvikela Yomuntu | Ukuthola nje amagilavu ​​e-PE / Latex / Nitrile / PVC
Ukuhola Imikhiqizo Ngaphandle
Sinikeza insiza yokumisa eyodwa, amakhulu amakhasimende asethemba ukuthi sizobanikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme
Ukukhiqizwa Kwemisa Kuyatholakala!
Imikhiqizo Yokuvikela Umuntu
I-Unidus (HK) corporation inikeza imikhiqizo yezokuphepha esezingeni eliphakeme ngamanani akhokhelekayo. Ukwenza imikhiqizo yezokuphepha ifinyeleleke emakethe enkulu ngaphandle kokuyekethisa ikhwalithi bekulokhu kungenye yezinjongo zethu. Imikhiqizo yethu itholakala kalula kumakhasimende noma nini lapho edingeka, ukuthi iyiphi indawo yokusebenza enokhahlo kunazo zonke.
Njengomkhiqizi ohola phambili wemikhiqizo yezokuphepha eChina, sinikeza ngezisombululo zokuphepha nezempilo eziphelele ukwenza ngcono ukuphepha kwendawo osebenzela kuyo. Amashumi ezinkulungwane zabantu athembele emikhiqizweni yethu ukwenza indawo yabo yokusebenza iphephe futhi kwenza umqondo ophelele webhizinisi.
Sisiza ukugcina izindleko zakho ziphansi ngokunikeza wena amanani ancintisanayo emikhiqizweni yethu. Sinikeza izixazululo ezinhle kakhulu zokusebenzisa imikhiqizo efanele ukufeza izidingo zekhasimende lakho ngaphandle kokudinga ukuchitha izindleko ezithe xaxa ekuthengeni umkhiqizo ongafanele.
I-Acree inezitshalo zayo zokukhiqiza eChina kanye nenethiwekhi yokusabalalisa ebanzi ezweni lonke. Sinikela ngezinhlobo ezingaphezu kwezingu-3000 + zezinto zokuzivikela (PPE) namathuluzi.
Lapho ukuphepha kwabasebenzi kuqinisekiswa endaweni yokusebenza, amathuba okukhuphuka komkhiqizo nokusebenza kahle aphezulu. Abasebenzi bakho bazozethemba futhi bakwazi ukugxila kulowo msebenzi osesikhundleni kunokuba bakhathazeke ngokuphepha kwabo nenhlalakahle yabo ngenkathi besemsebenzini.
Iminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni ekukhiqizeni i-Personal Protective Equipment (PPE), ikhiqiza ngaphansi kohlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi eliqinisekiswe ku-ISO 9001: 2015 Standard. Imikhiqizo yekhwalithi eqinisekiswe ezingeni elihlukile lamazwe omhlaba futhi isekelwa iThimba Elinamandla le-R & D ukwenza ngcono okuqhubekayo kuKhwalithi Yomkhiqizo.
Sizophendula umbuzo wakho kungakapheli amahora angama-24. Isekelwa iqembu lomphathi wezokuphepha onolwazi ukuhlinzeka ngosizo lobuchwepheshe olungcono kanye nethimba lokwakha elingaphakathi ukuze likusize ekwenzeni imikhiqizo ngendlela oyifisayo.
Thola kusuka kokuhle kakhulu
Sinikeza isisombululo esihle kakhulu ngokuphepha ngemikhiqizo nezinsizakalo ezigcwele. Sithinte ukuze sithole imali engcono kakhulu yokuqinisekisa ukuthi indawo yomsebenzi engenazingozi.
UMsombuluko- ULwesihlanu: 8: 00-18: 30 Hrs
(Ucingo kuze kube ngu-17: 30 Hrs)
NgoMgqibelo - 8: 00-16: 00
KwaNdlunkulu: FLAT C, 9 / F, WINNING HOUSE, NO.72-76, WING LOK STREET SHEUNG WAN, HONG KONG
Ifoni: + 86 512 56986025
Ifekisi: +86 512 58577588
Uyenze Kangakanani imikhiqizo ye-PPE
Kusukela kumenzi wamagilavu ​​e-PE, ngemuva kwentuthuko engaphezulu kwengu-10, manje sesinikeza izinhlobo ezingaphezu kuka-30 zemikhiqizo ye-PPE.
Ingabe wamukela OEM ubuningi oda elincane
Yebo, singakwazi ukuklama nokukhiqiza njengamakhasimende ngamunye izidingo.Samukela i-OEM ngobuncane obuncane, silindele ukuthuthukisa ibhizinisi ndawonye.
Ngabe uzokwenza ukuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa ngakunye?
Yebo, nge-oda ngalinye, senza ukuhlolwa ngenqubo ehlukile yokukhiqiza, futhi sizoba neqembu lethu elikhethekile le-QA ukuhlola ikhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa.
Siyini isiqinisekiso sakho sekhwalithi yawo wonke ama-oda alethwe?
Sizophendula ukukhononda kwamakhasimende kungakapheli amahora angu-12, futhi sinesibopho sazo zonke izingqinamba zekhwalithi.
Uyini amagama akho okukhokha?
Yamukela inkokhelo nge-T / T (Ukudluliswa kweBhange), L / C lapho ubona (ama-oda amaningi) ..
Imvamisa siletha uku-oda okusha kungakapheli izinsuku ezingama-30, kepha futhi senza i-push order ngesikhathi esifushane.
Ngingasithola kanjani isilinganiso sezimali?
Ngokujwayelekile singanikela ngesisekelo sokwaziswa okufana nomdwebo wobukhulu noma abalingiswa bomkhiqizo. Ungase futhi uthole isisekelo sokucaphuna esithombeni, sicela wazi ukuthi lapho kunikezwa isilinganiso esinjengalesi sinelungelo lokulungisa amanani entengo uma imininingwane engaziwa ivezwa ngokuhamba kwesikhathi.
Kuthiwani uma ngingawutholi umkhiqizo ofanele engiwufunayo kuwebhusayithi yakho?
Sifuna ukuba ngumthombo wakho ophelele wemikhiqizo ye-PPE. Sisebenza ukuhlinzeka ngezixazululo ezisiza amakhasimende ethu aphumelele. I-Acree futhi iyakwazi ukusiza ukuthuthukisa imikhiqizo ye-PPE ngokubambisana nawe. Futhi esimweni esingajwayelekile sokuthi thina asiwona umthombo ongcono kakhulu, sizokusiza ukukukhomba endaweni efanele.
Bhalisa Incwajana Yethu
Lapha uzothola ulwazi lomkhiqizo wethu omusha namanani entengo
Imininingwane 2012 - 2022 Vuma | Wonke Amalungelo Agodliwe | Inikwe amandla yi-Acree
Funda ukuthi sisize kanjani izinhlobo eziphezulu eziyi-100 zathola impumelelo.